MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA TARANKA NOOCA AH EE 'WIRE FOX TERRIER DOG' - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada Taranka Nooca ah ee 'Wire Fox Terrier Dog'
Bronte, oo ah 9 bilood jir sinjibiil ah oo loo yaqaan 'Wire Fox Terrier' (AKC reg.)
Liiska eeyaha Fox Fox Terrier Mix Noocyada
Koodhka Waayirka Fox
wy'ur fahks TAIR-ee daawasho
The Wirehaired Fox Terrier waa eey cabirkiisu dhexdhexaad yahay. Qalfoofku wuu fidsan yahay, dhexdhexaad ayuu u cidhiidhyaa indhaha. Joogsiga ayaa yar. Afka si tartiib tartiib ah ayuu ugu taabanayaa sanka madow. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqas. Indhaha iyo hareeraha indhaha ayaa midabkoodu mugdi yahay. Dhagaha yaryar, ee qaabeeya V ayaa horay ugu soo dhacaya meel ku dhow dhabannada. Qoorta waa dhumuc iyo muruq. Lugaha waa toosan yihiin. Dabada waa mid sare oo badiyaa waxaa lagu xiraa 1/4, iyadoo laga tagayo 3/4 dhererka asalka ah. Fiiro gaar ah: dhaqanka ku xirida dabo ayaa sharci darro ka ah inta badan Yurub. Dharka dharka ayaa leh timo cufan, qaloocsan, oo la mid ah timaha ku yaal bannaanka qumbaha. Timaha ayaa aad u dhumuc weyn isla markaana isku dhow marka marka la kala tago maqaarka ma arki kartid. Waxay leedahay jaakad gaaban oo jilicsan. Koodhku waa badanaa caddaan leh calaamado madow ama bunni ah.
Terreyda 'Wirehaired Fox Terrier' waa dhul geesi ah oo geesinimo leh. Waa farxad, jacayl, xamaasad iyo ciyaar, gaar ahaan carruurta. Kalgacal, aad u daacad ah oo daacad u ah qoyska, runtii way ku raaxeeysataa shirkadooda. Sababtoo ah dareenkeeda ugaarsiga ee xoogan, Wire Fox Terrier sidoo kale wuu ugaarsan doonaa oo suuragal inuu dilaa kuwa kale xayawaanka K-9 midna , sida bakaylaha iyo shimbiraha , haddii fursad la siiyo. Ku hay noocyadan sida saxda ah ha ahaato ama meel gebi ahaanba ku lifaaqan, maxaa yeelay Wire Fox Terrier wuxuu jecel yahay inuu baxo oo uu sahammo. Haddii silsiladda 'Fox Fox Terrier' si habboon loo dhex-dhexaadiyo oo loo soo bandhigo waxay la jaan qaadi kartaa eeyaha kale. Caqli badan, noocani waxaa lagu bari karaa inuu sameeyo tabo. Kani waa eey aad u awood badan, eey aad u tamar badan oo culeys iyo jahwareer dareemi karo iyadoo aan la helin nooca iyo qadarka jimicsiga saxda ah, maskax iyo jir ahaanba. Kaliya uma baahna in jirkiisa la jimicsado laakiin maskaxdiisa sidoo kale. Aad ayey muhiim u tahay inaad tahay eeyadan 100% adag, hogaamiye xirmo iswaafajin ah. Haddii eeygu leeyihiin milkiilayaal jilicsan oo ay u oggolaadaan terrier-ka inuu la wareego guriga, horumariyo Cudurka Dog yar , waxay bilaabi doontaa inay soo bandhigto darajooyin kala duwan oo ah arrimaha dhaqanka . Arrimaha waxaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidnayn, caqabadaha xukunka, ilaalinta walxaha ama meelo ama xitaa cuntadiisa u gaarka ah milkiilaha, qeylada xad dhaafka ah, xasadka, kala-go'id walaac , wax duminta, dagaalka gardarrada eeyga, badheedhka, cabaadka, qabashada, qaniinyada iyo kalsooni-darrada carruurta iyo mararka qaarkood dadka waaweyn. Eyga ayaa laga yaabaa inuu diyaar u ahaado inuu lacag bixiyo marwalba, xoq iyo kacsanaan, maadaama uu isku dayayo inuu difaaco booska ugu sareeya ee alfa. Kuwani maaha sifooyinka 'Wire Fox Terrier', laakiin waa dabeecado ay keeneen habka eygu ula dhaqmo dadka ku hareeraysan. Dabeecadahaan waa la sixi karaa isla marka dareenka eygu kulmo: xasiloon, adag, iswaafaqsan xeerarka la raacayo , xaddidan waxa ay tahay iyo waxa aan loo oggolayn in la sameeyo, oo ay weheliso maalinle ah xirmo socod ama orod .
siberian husky isku dhafka dane weyn
Dhererka: Ragga 14 - 16 inji (36 - 41 cm) Dumarka 13 - 15 inji (33 - 38 cm)
Miisaanka: Ragga 15 - 20 rodol (7-9 kg) Dumarka 13 - 18 rodol (6 - 8 kg)
Suuxdinta waxaa si weyn looga shakisan yahay inay leedahay qayb hidde ah oo ka mid ah noocyadan. Qaar ka mid ah walaacyada yar yar ayaa ah dheecaanka sanka ka dib, muraayadda muraayadaha indhaha, 'distichiasis', cataracts, Legg-Calvé-Perthes syndrome iyo kala-baxa garabka. U janjeera burooyinka unugyada .
Wire Fox Terrier wuxuu ku fiicnaan doonaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid aad u firfircoon gudaha gudihiisa waana wax hagaagsan bilaa deyr.
waa maxay eegno eey schnoodle sida
Silsiladaha Fox Fox waxay u baahan yihiin a socod maalinle ah ama orod . Hadday suurtagal tahay, waxay jeclaan lahaayeen inay si xor ah uga cararaan aag ammaan ah. Eygan dusha ka saar haddii ay jiraan xayawaano yaryar oo hareeraha ka jira. Rabitaanka eydaani ay ugaarsanayaan ayaa ah mid xoogan waxayna u badan tahay inay ka baxaan ceyrsashada xayawaan yar.
Haddii silsiladdaada Foxhairedha ee Wirehaired Fox ay noqon doonto xayawaan rabaayadeed, waad ku baxsan kartaa adigoo ku cadaya buraash adag isla markaana maydhashada kaliya marka loo baahdo. Si aad u ilaaliso jaakadu inay u ekaato sida ugu fiican, waa in laga siibaa dhowr jeer sanadkii iyo in ka badan si eyda tusitaanka ah. Waxaa jira nidaamyo isku-dhafan oo isku-dhafan oo isku-dhafan. Xirfadlayaasha xirfadleyda ah waxay leeyihiin boorso xeelado aad u badan si siliggu ugu ekaado sida ugu fiican giraanta bandhigga. Siliggu wuxuu daadiyaa timo yar oo aan timo lahayn wuxuuna ufiicanyahay kuwa xasaasiyada qaba.
Fox Terrier-ka waxaa soo saaray iyadoo laga talaabayo qadiimiga ah Dachshunds , Ingiriis Hounds, ka dibna the Fox Hound iyo Gorgor . Waa mid ka mid ah eyda nooca ugu da'da weyn, kana soo jeeda Islaantii Ingiriiska qarnigii 17aad. Waxaa isticmaali jiray beeralayda u baahan eeyaha si ay uga caawiyaan ka takhalusida xoolaha dhaca ugaadhsiga beeralayda, sida dawacada iyo jiirka iyo xayawaano kale oo yaryar. Fox Terrier wuxuu ka heli lahaa xayawaanka dhulka ku jira, isagoo si hagar la’aan ah u qodaya, ciyeynaya, cibaadaynaya isla markaana neefsanaya ilaa ay xayawaanka ka cidhiidhyaan godkiisa halkaas oo ugaadhsaduhu markaa ku dili karo. Fox Terrier wuxuu ku yimid labis siman iyo jaakad silig leh labadaba waxaa loo tixgeliyey inay isku nooc yihiin sannado badan. The Wirehaired Fox Terrier waxaa lagu dhajiyay iyadoo laga gudbayo Terrier-ka madow iyo tan madow ee adag, si loogu adeegsado dalka qallafsan, jaakaddiisu waxay u nugul tahay waxyeelada ka yar tan Cajiib ah Fox Terrier . Heerkii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Smooth Fox Terrier' waxaa la aasaasay 1876, isaga oo ka soocaya eyda siligga leh. Si kastaba ha noqotee, wali waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin nooc isku mid ah oo leh noocyo jaakado kala duwan ah oo kooxaha qaar ah, laakiin waxaa lagu kala saaray Mareykanka tan iyo 1984. Labada siman ee Fox Terrier iyo Wirehaired Fox Terrier waxaa AKC aqoonsaday 1885. Qaar ka mid ah Fox Hibooyinka Terrier-ka waxaa ka mid ah: ugaadhsiga, daba-galka, ilaaliyaha, firfircoonida iyo qabashada tabaha.
CET = Naadiga Isbaanishka ee Terriers ( Naadiga Isbaanishka )
'Salaam. Kuwani waa sawirrada Frida, haweenkeenna Wirehaired Fox Terrier markii ay 8 bilood oo keliya jirtay. Iyadu waa eey aad u fiican, waxay jeceshahay inay qoyska la joogto maalin dhan. Markii ugu horreysay ee aan helo waan yara yara baqay ’sababta waxaan maqlay in noocani yahay mid laga cabsado oo laga xanaaqo, inay iyagu sameyn doonaan wax walba calali , laakiin sidaas maahan. Way u baahan tahay jimicsi badan , laakiin runtii wuu deggan yahay guriga gudihiisa. '
Jack russell jiirka terrier mix
'Tani waa Frida, haweeneyda Wirehaired Fox Terrier markii ay 8 bilood jirtay.'
Defa, waa 4 jir Wirehaired Fox Terrier ah oo la socota Molly, oo ah Ey Wirehaired Fox Terrier ah oo jira 4 bilood.
Asta iyo Ruppert, laba farxad leh oo loo yaqaan 'Wire Fox Terriers' ayaa si toos ah xiriir ula leh aabbahood, kaasoo ku guuleystey ugu wanaagsan xagga taranka 2003 Westminster Dog Show.
3-sano jir Wire Fox Terrier oo kubad ku ordaya
3-sano jir ah Wire Fox Terrier
shih tzu dawaco terrier mix
Molly, oo ah Ereyga Fox Terrier ee Wirehaired ee jira 4 bilood
Defa, waa 4 jir Wirehaired Fox Terrier ah
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah silsiladda Fox Fox
Sawirada Wayaalka Fox Fox 1
Silsiladaha Fox Fox: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
cairn terrier poodle qas puppy
ceel dib terrier feer isku darka
sawirrada Terrier pitbull